Tilmaamaha NTT-Toner ee lagu hagaajinayo Hawlahaaga Hal-abuurka ah oo lagu daabacay Mashiinnada Walaalaha | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | General, Tricks, dhowr
Markaad la shaqeyneyso feylasha dhijitaalka ah, dhibaatooyinka qalabka ma ahan waxa noogu weyn. Dhibaatooyinku sida caadiga ah waxay bilaabmaan marka aan isku dayno inaan ka dhabeyno shaqadaas quruxda badan ee nagu qaadatay waqti iyo dadaal badan. Tani waa sida Waxyaabaha ugu horreeya ee waxyeellooba ama aan jawaab celin laga helin waa daabacayaal.
Noocyadu sida caadiga ah ma jecla inaynu isticmaalno faashad is waafajin kara, daabacayaashu waxay leeyihiin qiimo aad u jaban oo horay ayaa loogu sii rakibayaa gulufyo nus-xamuul ah oo noo oggolaanaya inaan dhowr daabacno sameyno. Goor dambe, ganacsiga dhabta ahi wuxuu ku jiraa khaanadaha, oo leh qiimayaal badanaa xadgudub ah waana sababtaas sababta inkirada la jaan qaada ay aad u xiiso badan yihiin. Khaanadaha khadadka la jaan qaadi kara had iyo jeer waa inay noqdaan xulasho la tixgeliyo.
Mararka qaarkood dhibaatooyinka iswaafajintu waxay u muuqdaan kaydadka la jaan qaadi kara. Inta badan waa dhibaatooyin soo noqnoqda, oo markii aad ogaatoba, aad bay u fududahay xallinteeda.
Marka laga hadlayo, tusaale ahaan, daabacayaasha Walaalaha aan ka hadlayno, waxaa jira dhibaatooyin guud oo gaar ah oo ka dhigi kara madbacadeena mid aan faa'iido lahayn laakiin runti si fudud ayaa lagu xallin karaa. Xaqiiqdii dhibaatada ugu weyn, tan naga dhigeysa inaan isku dayno is waafajin oo aanan dib ugu laaban, waa ogeysiiska inaysan aqoonsaneyn kaydadkayaga. Sidan ayaan u maleyneynaa inaysan ku habbooneyn oo waxaan ku laabaneynaa qashinka asalka ah.
Laakiin tani waxay leedahay xal. Waayo, NTT-Toner ayaa na waaninaysa oo si faahfaahsan u sharraxaysa sida aan u xallin karno dhibaatooyinka ka dhasha waqtiga daabacaadda. Maqaalkan, Jordi R, ayaa sharraxaya sida loo helo daabacayaasha Walaal si ay u aqoonsadaan kaydadka la jaan qaadi kara. Sidan ayaad u isticmaali kartaa noocyada kala duwan ee kaydadka iyo khafiifinta walaalka
1 Walaalkaaga daabacadiisu miyaanuu aqoonsaneyn gulufyada isku habboon?
1.1 Tallaabada ugu horreysa waa inaad iska hubiso walaxda kartridge
1.2 Waxaan kuu sharxeynaa sida loo beddelo qalabka
1.3 Haddii jabku wasakh yahay
1.4 Dib u dejiso miiska ama qashinka tayada liita
1.5 Hubi kartoonada isku habboon
1.6 Hubi daabacaha
Walaalkaaga daabacadiisu miyaanuu aqoonsaneyn gulufyada isku habboon?
Hadaad mid leedahay Walaal daabacad oo si lama filaan ah uma aqoonsana kartridda la jaan qaadi karta, waxaan kuu sharraxeynaa sida looga hor istaagi karo mashiinka walaalkaa inuu ku tuso farriinta "Kaydadka lama aqoonsana" Talaabo talaabo.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad iska hubiso walaxda kartridge
Jilibka waxaa lagu keydiyaa dhammaan macluumaadka kaydadka, haddii ay soo bandhigto khaladaad ama ay si fiican u shaqeyso, heerka khadadka, dareenka laga sameeyay waxyaabaha kale iyo badanaa waa sababta keentay in madbacadeena uu joojiyo aqoonsiga gulufyada isku habboon.
Waa muhiim in qashinku ku jiro xaalad wanaagsan si kaydadka uu si buuxda ugu shaqeyn karo, taas oo macnaheedu yahay in si xun ula dhaqmida ay sababi karto dhaawac aan laga soo kaban karin iyadoo aad u jilicsan.
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo beddelo qalabka
Dhinac waa inaad iska hubisaa in qaladku uusan ahayn sidaas jabkii ayaa soo baxay. Xaaladdan oo kale waxaad u baahan doontaa oo keliya dib u hagaaji waana taas
Dhinaca kale waan awoodnaa beddel kaydadka Laakiin haddii aanaan rabin ama aannaan haysan waqti ama lacag aan ku iibsanno mid kale oo aannu xoogaa xirfad leenahay, waan iska beddeli karnaa nafsaddayada.
Faa'iidada isticmaalka gulufyada la jaan qaadi kara ayaa ah in kuwani si jajab ah loo kala iibsado, oo ka duwan asalka asalka ah ee qasnadda oo dhan la beddelayo.
Dhinac waa inaad jabisaa jabinta xaalad xun si aad awood ugu yeelatid midka cusub. Si taxaddar leh u adeegso mindi hareeraha caarada. Ogsoonow in jajabyada qaar lagu xaqiijiyo madax caag ah. Haddii taadu aysan haysan, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho xabag yar oo qalajisa oo dhaqso ah oo aad ku dhejin doonto geesaha qarkiisa si taxaddar leh si aad u awooddo inaad xajisato.
Haddii jabku wasakh yahay
Mararka qaarkood way dhici kartaa in guntin si fudud loogu wasakheeyey hadhaaga khadadka daabacadaha, taas oo macnaheedu yahay waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad ku nadiifiso adigoo isticmaalaya gabal faashad ah. Ku faji faashadda aalkolo ama biyo si aad u nadiifiso, ka dibna u isticmaal gabal kale oo faashad aan nadiif ahayn si aad u qalajiso. Hadday intaas oo keliyuhu ahayd inuu si fiican u shaqeeyo, haddii aysan shaqeynin waa inaad iska hubisaa in xiriirada daabacaadaha aan la wasakheyn sidoo kaleXaaladdan oo kale, waa inaad sii waddaa inaad iyaga nadiifiso sidoo kale.
Dib u dejiso miiska ama qashinka tayada liita
Dhibaatooyinka kale ee aanu daabacaagu aqoonsanayn gulufyada isku habboon ee aad isticmaaleyso waxay noqon kartaa in guntinta ay tayadeedu liidato, taas oo macnaheedu yahay inaad ka fikirto beddelka gulufyada isku habboon oo aad raadsato kuwa ku habboon si aad u awoodo inaad daabacdo dhibaato la'aan.
Dhinaca kale, waxay noqon kartaa inaad u baahan tahay inaad dib u dhigto miiska daabacaha ee mararka qaarkood joojiya inuu si fiican u shaqeeyo oo ina tusaya qalad inkasta oo kaydadka uu gebi ahaanba buuxo oo aan haysanno khad dheeri ah.
Daabacaha waxaa kujira qayb dib udajin dhib la'aan ah.
Hubi kartoonada isku habboon
Haddii jabku uusan dhibaatada ahayn wuxuu noqon karaa isla kaydadka.
Si tan loo sameeyo, hubi in kaydadka si habboon loogu dhejiyay daabacadda. Haddii kale, si fiican u dhig adigoo riixaya si taxaddar leh gudaha si ay si fiican isugu xidho, taasi waxay dhici doontaa markaad maqasho guji.
Xaaladdan oo kale daabacaddu mar labaad ayey ogaan doontaa waana inay si sax ah u shaqeysaa.
Dhinaca kale Waxay noqon kartaa in garaashka uusan xaalad kujirin oo cilad uu leeyahay, taas oo macnaheedu yahay waa inaan diidno oo aan soo iibsanno kaydad kale maadaama aan la hagaajin karin.
Qeybta ugu dambeysa waa inaad hubi daabacan maadaama ay iyaduna sabab u noqon karto inaadan aqoon garaashyada. Tani way dhici kartaa maxaa yeelay marka la cusbooneysiinayo Firmware-ka, mar dambe ma ogaaneyso iyaga sababtoo ah cusbooneysiinta. Mararka qaarkood shirkaduhu waxay noo abuuraan cusbooneysiin si aan u iibsanno kartoonnada asalka ah xaaladdanna way adag tahay in dib loogu noqdo qaabkii hore laakiin sidoo kale macquul maahan Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan sida loogu laabto qaybtii hore iyaguna way kuu sharixi doonaan adiga talaabo talaabo ah si aad ugu sii wadato adeegsiga daabacaadaada kartridarrada is haysta oo aanad qarash gareeynin.
Haddii aadan cusbooneysiin, ha sameynin. Daabacaha ayaa sii wadi doona inuu u shaqeeyo si sax ah iyadoon loo eegin cusbooneysiinta waligiisna dhib kuma lahaan doontid noocyada noocaas ah.
Hadda oo aad taqaanid sida loo xalliyo dhibaatada, waxaad u noolaan kartaa mashruucaaga. Isticmaalna gulufyo isku habboon oo aan dhib lahayn.
Tilmaamahan fudud waxaan ku xallinaynaa waxa dhibaato weyn noqon kara waxaanna ku soo ceshanaynaa gulufyadii aan is kaashan lahayn ee daabacaha Walaalkeen. Ma ogtahay dhibaatooyinka kale ee guud ee la xidhiidha adeegsiga kaydadka khadadka isku habboon? Waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale hagaajin karno
In aan dooran karno sida loo adeegsado shay aan soo iibsannay waa xaq aan ku andacoonno. Xulashada nooca khad ee aad isticmaaleyso waa inay adiga ahaataa oo aysan aheyn qiyaas lagu soo rogay. Marka ku raaxayso kaydadkaaga iswada jaanqaadaya ama midka asalka ah, kan aad doorbideyso ;-)
Oo maxaad isticmaashaa? Miyaad inta badan cuntaa miisaska isku habboon ama had iyo jeer ma tagtaa kuwa asalka ah? Miyaad u maleyneysaa in kuwa iswaafajinaya ay leeyihiin tayo la mid ah khad asal ah? Waxaan aad u xiiseyneynaa inaan ogaano aragtidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Tilmaamaha NTT-Toner si loo hagaajiyo shaqooyinkaaga hal-abuurka ah ee lagu daabacay mashiinnada Walaalka
Facebook ayaa raaligalin ka bixisay olole xayeysiin ah